Cuntada bisadu ma ku faafaysaa aadanaha? | Bisadaha Noti
Bisada mange waa la is qaadsiiyaa dadka
Monica Sanchez | | Cudurada, Bisadaha
Waxaa jira cuduro badan oo saameeya bisadaha, laakiin kuwa sida caadiga ah quseeya kuwa kula nool markii ugu horeysay, waa kuwa noocyada faafa sida isnadaamiska. Si kastaba ha noqotee, cayayaanka sababa asxaabteena kuma noolaan karaan muddo aad u dheer jidhka bini'aadamka, markaa astaamuhu way ka duwan yihiin.
Wali, waa in la qaadaa talaabooyinka lagama maarmaanka u ah si looga hortago bisadda iyo daryeelayaasheeda inay cudurka qaadaanSababtoo ah labadaba midkood iyo kan kaleba waa cudur runtii aan raaxo lahayn oo ay adag tahay in lala qabsado.
1 Waa maxay isnadaamiska?
2 Noocyada mange-ka ee saameeya bisadaha
3 Calaamadaha ugu badan
4 Daaweynta isnadaamiska bisadaha
5 Si aad u tixgeliso
Waa maxay isnadaamiska?
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay isnadaamis. Xaqiiqdii, maqalka eraygan waxaan isla markiiba dareemi karnaa cuncun qariib ah lugaha iyo / ama gacmaha. Tan darteed, waxaan jeclahay inaan ugu yeero 'cudurka cuncunka', in kastoo uusan ahayn magaceeda caanka ah. Cuncun ay soo saartay ku dul-nooleyaasha Waxay ka tirsan yihiin isla qoyska sida caarada. Waxay ku hooraan maqaarka hoostiisa, halkaas oo ay ka qotaan godad yaryar. Badanaa laguma arki karo isha qaawan.
Bini'aadamka, waxaa lagu kala qaadaa taabashada tooska ah ama aan tooska ahayn ee maalin kasta, taas oo ah, taabashada dharka iyo / ama qof cudurka qaba ama xayawaan. Isnadaamiska si fudud ayaa loo kala qaadaa sidaa darteed aad ayey muhiim u tahay in haddii mid ka mid ah ehelkaaga (iyo / ama xayawaanka) laga helo cudurkaan, wax kasta oo suuragal ah in la sameeyo si looga fogaado infekshanno kale.
Noocyada mange-ka ee saameeya bisadaha
Mange aadamuhu runtii aad ugama duwana kan bisadaha wax yeeleeya, maaddaama astaamuhu isku mid yihiin sidaad hoos ku arki doontid. Si kastaba ha noqotee, iyadoo kuxiran nooca isnadaamiska ee saaxiibkeen leeyahay, waa inaan qaadnaa talaabooyin ama kuwa kale.
Sidaa awgeed, mangeeda inta badan saameeya bisadaha waa kan ay soo saareen Cati notoedreswacid isnadaamiska noothedral. Dulli-noolahaani wuxuu ku noolaan karaa oo keliya jirka loo yaqaan 'feline', marka si kasta oo ay u rabto inay ugu noolaato jirka bini'aadamka ... wax dhibaato ah ama cuncun ah nama soo gaareyso.
La manode demodectic, waxaa soo saaray dulinka loo yaqaan Demodex canis taas oo sida caadiga ah ku dhacda eeyaha, laakiin sidoo kale waxay saameyn kartaa bisadaha. Waa inaan kuu sheegaa in eeygayga mid ka mid ahi u haystay eey, iyada oo dawaynta ay bixiso dhakhtarka xoolaha isla markiiba la bogsiiyey. Isnidaamiska noocan ah ma aha mid lagu kala qaado dadka.
Waa inaad ka taxaddartaa cheiletiellosis iyo la dheecaanka dhagaha, Maaddaama ay ku dhammaan karaan inay ka soo muuqdaan qaar ka mid ah finan gacmaha iyo lugaha.
Calaamadaha ugu badan
Bini-aadamka astaamaha waa sida soo socota:
Cuncun xoog leh: Gaar ahaan habeenkii. Qofna ma jecla inuu cuncun dareemo, markaa falcelinteena ugu horreysa had iyo jeer waxay noqon doontaa inaan is xoqno. Tani waa wax ay tahay in laga fogaado maaddaama haddii kale dareenka ay u badan tahay inuu kordho ... sidaas darteed quudinta wareeg xun oo ku dhammaan kara nabarka cudurka qaba.
Qaraxyada yaryar: Si loo bogsiiyo, waxna ma ahan sida kareemka la dhigo iyo in la qaato daawada uu dhakhtarku kuu qoray. Laakiin haddii aad u baahan tahay daaweyn deg-deg ah, ku tirtir aagga ay dhibaatadu saameysey cudbi ay qoyan yihiin oo ay ku jiraan dareere injirta injirta, waxaadna arki doontaa sida tartiib tartiib ah ee aad u bogsaneyso
Saaxiibadeena dhogorta badan calaamadaha waa ku kala duwan yihiin:
Cuncun: waxaad arki doontaa sida had iyo jeer loo xoqo meelaha ay dhibaatadu saameysey, taas oo mar dhow timo waayi doonta ama u muuqan doonta casaan iyo / ama bararsan.
Dhaawacyada: ciddiyaha bisadu waxyeello badan ayey geysan karaan, sidaa darteed xoqitaan joogto ah awgood, boogaha ayaa ka mid ah astaamaha ugu caansan.
Dhego-beelka dhegaha ee xad-dhaafka ah: haddii ay dhacdo inuu saameeyo dhegaha, wax aad u badan ayaa sababi kara otitis.
Daaweynta isnadaamiska bisadaha
Isnadaamiska waa cudur aad u fudud oo lagu daaweeyo, laakiin muddada daaweynta ee noqon karta mid aad u dheer. Aad iyo aad bay u badan tahay in sida caadiga ah lagu taliyo in la isku daro laba daaweyn si tayada nolosha xayawaanku ugu noqoto sidey ahayd. Iyo, liddi ku ah waxa ay umuuqato, ficil ahaan isla daawooyinka loo isticmaalo in lagu daweeyo cudurka isnadaamiska ayaa si caadi ah loo adeegsadaa si looga hortago in ay ku dhacdo boodada, shilinta iyo dulinleyda gudaha.
Marka, waxaa jira dhuumaha in, ka sokow dib u celinta labada cayayaan ee ugu caansan, ay sidoo kale dili doonto cayayaanka isnadaamiska. Waxaa jira noocyo dhowr ah, sidaa darteed dhakhtarkaaga xoolaha ayaa ku siin doona midka uu u arko inuu ugu fiican yahay bisaddaada. Laakiin maahan oo kaliya boodhadhka, laakiin waxaad u badan tahay inaad siiso saaxiibkaa kiniiniyada si loola dagaallamo cudur ka yimaada jirka xayawaankiisa. Ikhtiyaar kale ayaa ah daawo kaa siiya xididka, gaar ahaan haddii aad aad u neceb tahay ama aysan jirin wax aad ku liqdo kiniinka.
Sidaan soo aragnay, waxaa jira noocyo kala duwan oo mange ah oo saameeya bisadaha. Badbaadada awgeed waa ku habboon tahay in xayawaanku qolka ku sii jiro inta uu ka bogsanayoLaakiin iska jir, tani macnaheedu maaha inaan joojinno daryeelkiisa: wuu jiran yahay, haddana in ka badan sidii hore ayuu u baahan yahay inuu dareemo jacayl.
Iyo, sidee jacayl loo siiyaa si looga fogaado infekshanka? Waa hagaag, aad u fudud. Way kufilan doontaa in gacmo gashi la gashado oo maalin walba dharkeenna la maydho, laakiin kaliya maahan midka aan xirano laakiin kan sariirta saaran, sida bustayaasha iyo go'yaasha. Haddii ay dhacdo inay jiraan carruur yaryar iyo / ama xayawaan kale oo guriga jooga, way ku habboonaan doontaa iyaga ka fogee bisadda jiran. Sidaas ayaa xubno badan oo qoyska ka mid ah looga hortagi doonaa inay cudurka qaadaan.
Waa inaad dulqaad badan yeelataa maxaa yeelay, sidaan nidhi, isnadaamiska waa cudur waqti qaadan kara si loo daaweeyoSidaa darteed, tilmaamaha takhasuska waa in la raaco si xaaladdu caadi u noqoto sida ugu dhakhsaha badan.
Waan ognahay inay ka sahlan tahay in la yiraahdo (ama qoran) intii la qabtay, laakiin runtii, ha quusan. Mange oo ku dhacda bisadaha waa cudur, oo goor hore la ogaado, lagu bogsado maalmo gudahood ama, ugu badnaan, toddobaadyo. Maalmahan waxaa muhiim ah in ninkaaga dhogorta badani uu ogaado inaad jeceshahay marka waxaad heysataa tamar aad ubaahantahay si aad ugu laabanto ahaantaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cudurada » Bisada mange waa la is qaadsiiyaa dadka
86 faallooyin, ka tag taada
Waxaan haystaa 12 bisadood shanna waa ilmo jira laba bilood, laakiin waxay iga buuxiyeen isnadaamiska waxaanan u qaaday inaan talaalo si aan u arko haddii laga saaray, kaliya waxaan jidhkayga ku leeyahay piketizas waana u malaynayaa inay taasi tahay sababta.
Ku jawaab irma fernandez arreola
Waa salaaman tahay, waxaan seexday sariir ay bisadaha walaalkay ku seexdaan maalmo yar ka dib jidhkayga oo dhammi waxay bilaabeen cuncun. Waxaan horey isugu dayay Ivermectin 2 jeer iyo kareemo la yiraahdo Detebencil oo cuncunka ma baxo, arinta layaabka leh ayaa ah inaanan lahayn dhibco ama xoqitaan. Soo jeedin kasta? Waad ku mahadsantahay horay. Salaan.
emilio ciise dijo
Bisadeyda waxaan u maleynayaa inuu qabo cudurka isnadaamiska, waxaan u geynayaa dhakhtarka xoolaha oo wuu xaqiijinayaa, hadda waxaan dareemayaa cuncun jirkeyga oo dhan, maxaan sameyn karaa?
Jawaab emilio ciise
Waxaad u tagi kartaa dhakhtarka si laguu baaro oo aad u qortid kareem. Sikastaba, mararka qaar - ma dhahayo taasi waa kiiska - jirkeenu wuu ka badbadiyaa xaaladaha noocan ah. Aan sharaxaad ka bixiyo: marka aan leenahay bisad leh cudurka isnadaamiska, waxay noqon kartaa middaas, maxaa yeelay waxaan aad uga walaacsanahay in aan ku dambayno infekshinka, waxaan bilaabi doonnaa cuncun annaga oo aan dhab ahaan qabin cudurka. Laakiin, sidaan idhi, dhib malahan inaad bixiso booqashada dhaqtarka, haddiiba ay dhacdo.
Waxaan qaatay bisad yar oo 3 bilood jir ah oo waxaa igu dhacay isabab, way adagtahay in la ogaado maxaa yeelay waxay ka bilaabatay wajigayga, waxaan aqriyay dhowr maqaal oo ah inaysan wejiga ku dhicin taasna shaki ayaa i gelisay, laakiin haddii ay ku dhacdo wajiga, hal gacan, dhabarka xoogaa iyo gacmaha intabadan, waxa ugufiican waa inaadan xoqin meel kasta, way cuncun badan tahay, laakiin hadaad xoqdo way balaaraneysaa, waa sida belaayo,
Waxay ku bilaabataa cuncun caadi ah, ka dib marka qofku u xoqo sidii inuu maqaarka jebiyo halkaasna cayayaanku ku hoydo, fin yar ayaa ka soo baxa kaas oo markaa ku soo baxa malax ama biyo, marka uu xoqmo finku wuu dilaacaa oo biyo ama malax waa mid ku sii fidaya meelo kale oo samaynaya granites cusub iyo wixii la mid ah, taasi waa sababta aan loo xoqin, mararka qaarkood macquul maahan laakiin isku day inaad dhakhso uga saarto, marka horeba waxay u qoreen saabuunta baaruud asepxia, mar kasta oo aad xiriir la leedahay xayawaanka, isla markiiba dhaq , waad ku qubeysan kartaa saabuunkan sidoo kale, laakiin ma ahan qeeybaha isku dhow, waxaan kaloo isticmaalaa kareem la yiraahdo Crotamiton, waa in lagu maydhaa biyo kulul ka dibna 24 kii saacba mar la marin jidhka oo dhan si siman laga bilaabo qoorta ilaa cagaha adigana waa inaad ku dalbataa dhaqdhaqaaq wareegsan ilaa kareemka jirka ku dhalaalayo, kareemka ayaa finka ka dhigaya inay soo baxaan oo qalalaan, waa inaad ka taxaddartaa dareeraha ka soo baxa finka maxaa yeelay taasi waa tan ku dhacda lamaanaha kale tijaabooyinka jirka, sidoo kale dhaqtar xoolaha ayaa ii sheegay inaan ku maydho laamboolka ama shaamboo kasta injirta, waxaan ku maydhay qubeyska sidii saabuun, waxaan uga tagay 5 daqiiqo oo waan mayriyay, runta ayaa ah inaan iska siibay dhowr saacadood. Cuncun, Weli waxaan qabaa isnadaamis, laakiin ku dhowaad dhammaan dhaawacyadaydu way ka qalalan yihiin, in kasta oo ay cuncunka sii wadaan.
Wax kasta oo qofku ku sameeyo jirka ka sokow, waa inaad beddeshaa go'yaasha, gogosha iyo dharka maalin kasta, dharkaasi waa in la kariyaa ama lagu maydhaa biyo kulul, waxaa jira dhar midab leh oo ka hortagga bakteeriyada leh (haddii ay isticmaali karaan waa ka wanaagsan tahay ), ka dibna haddii ay qalajiyaha leeyihiin xitaa ka sii fiican, haddii aysan haysan, isku day inaad dharka birta siisid, si ay u dilaan caarada, waa inay si fiican u faarujiyaan gurigooda oo ay ka dhigaan lisoform deegaanka iyo meelaha kala duwan ee guriga.
Waxaan rajeynayaa in khibradeyda ay ku caawin doonto
Ku jawaab katherine
Aad baad u mahadsan tahay, khibradahaaga oo dhami wax weyn bay i caawiyeen
Weyn, waan ku faraxsanahay inay kuu adeegtay 🙂
Bisadaydu waxay leedahay isnadaamis, markay xoqdona timo badan ayey iska tuuraysaa, waxaan rabaa in aan ogaado haddii ay xun tahay maxaa yeelay gurigayga ilmo ayaan ku haystaa, fadlan i caawi.
Ku jawaab Angelica lizana mayta
Haye! Labo maalmood ka hor waxaan ka soo qaaday bisad dariiqa, waa inuu jiraa ugu yaraan labo bilood. Wuxuu leeyahay nabarro iyo timo yaraanta kilkilaha labada lugood ee hore, qeybta udhaxeysa lugta iyo jirka. Laakiin isagu halkaas kuma xoqdo ama uma eka inuu xanaaqsan yahay, miyey noqon kartaa isnadaamis? Mise waxbaa ku dhacay isaga oo halkaas ku dhaawacay?
Waan ka xumahay, laakiin anigu ma ihi dhakhtar xoolaha ah. Waxaan kugula talinayaa inaad u gayso xirfadle, si aad u fiiriso oo aad deganaan badan u hesho.
Ka fogee ilmahaaga bisaddaas, way qabsan doontaa. Waxaan kuu sheegayaa khibradeyda waxaan qabaa isnadaamis waxaana lagu soo saaray saliid baabuur gubatay, waxay u egtahay wax qariib ah laakiin taas waa laga saaray mana dhaawaceynin maqaarkayga iyo waxna. Salaan.
Ku jawaab Bonnie
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa bisad duug ah oo aan ka soo qaaday wadada 5 sano ka hor oo aan si lama filaan ah u bilaabay inaan la buko shuban biyo, waxay siiyeen daawo wuuna soo fiicnaanayaa, laakiin sabtigii la soo dhaafay waxaan u geeyay dhakhtarkiisa waxaanan ogaaday finiin HIV ama AIDS, waligiis aad buu iigu dhowaa aniga laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan qatar ugu jiro cudurkiisa, runtu waxay noqon kartaa inaan u dhawaaqo jaahil laakiin way i cabsiisaa. Mahadsanid.
Angelica: Bisadaha leh isnadaamiska waa in laga ilaaliyaa dhallaanka, mar walbana waa inaad dhaqdaa gacmahaaga markaad taabato.
Laura: feline AIDS-ka ma ku faafayo aadanaha. Dareenkan, waxay la mid tahay HIV oo dadka ku dhaca: waxaad ula joogi kartaa bisadaada si degan inaanay waxba dhici doonin 🙂.
Dunida Xoolaha dijo
Maqaal aad u fiican kuwa annaga jecel bisadaha. Waan jeclahay balooggaaga, mar dambe ayaan aqrin doonaa
Jawaab Mundo Xoolaha
Adeerkey wuxuu leeyahay isnac oo waxaan ka baqayaa inaan bisadeyda la imaado taasi suurta gal ma tahay?
Sidoo kale, sideen ku ogaadaa markay tahay wax ka badan dhukayga madow maadaama aan tilmaamayo in bisadayda laga yaabo inay yeelato isnadaamis ……
Jawaab J! M € N @
Dunida Xoolaha: waxaan ku faraxsanahay inaad jeceshahay baloogga.
J! M € N @: Haa, cudurka isnadaamiska ayaa ku faafi kara bisadda una gudba bini-aadamka iyo bani-aadamka ilaa bisadda. Labadaba dartiis, waxaa fiican inay kala maqnaadaan illaa ay ka bogsato gebi ahaanba.
Haddii bisaddaadu bilawdo inay xoqdo wax ka badan intii caadiga ahayd, markaa waxay noqon kartaa inuu ku dhacay cudurka.
Waad salaaman tihiin. Waxaan rabaa inaan helo macluumaadka bisadda. Waxaan hayaa bisad 4 bilood jir ah oo dabadeeduna ay qaawan tahay laakiin caarada saaran tahay. Miyay tahay inaan la tashado dhakhtarka xoolaha? Waxaan jeclaan lahaa inaan dib u maqlo
Waad salaaman tahay Monica.
Haddiiba ay dhacdo, waxaa fiican in iyada la geeyo dhakhtarka xoolaha. Ma noqon karto mid halis ah gabi ahaanba, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee laguu daaweeyo, ayaa sida ugu dhakhsaha badan aad u bogsan doontaa.
Shalay waxaan ka badbaadiyey bisad dariiqa waxaanan fahamsanahay inay leedahay zarna, waxay leedahay 1 bil oo soo socota waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan ku ogaan karo inay tahay zarna maxaa yeelay waa peladito laakiin kaliya wuxuu ku gurguurtaa waxna ma jiro .
Sidee is burinayaa, marka hore waxay sheegaysaa in uusan ku faafin bina aadamka aakhirkiina wuxuu leeyahay "sidee loo siiyaa kalgacal iyadoo laga fogaanayo isqaadsiinta?" Sida iska cad waa la is qaadsiin karaa, waxa dulinku u baahan yahay waa nudaha noolaha, macno malahan hadii ay ka timid bisad, ey ama dad, marka ha u been sheegin dadka adoo ka dhigaya dulinkan halista ah inuu u ekaado wax aan dadka wax u dhimeyn. Dulli-wadahani waa mid aad u adag in la ciribtiro maadaama uu u hoggaansamo dharka, sariiraha oo aan saabuun iyo biyo midna ka saarin. Kaliya kuma sababi karto xanaaqa bini-aadamka laakiin xitaa waxay si daran ugu dhacdaa dhiigga waxayna ku keeni kartaa calaamado daran dadka qaba difaac hooseeya. Fadlan ogow inaad jeceshahay xayawaanka rabaayadda ah laakiin si khaldan ha u sheegin. Xayawaanka ka faquuqo, daawee, oo nadiifi oo jeermiska ka nadiifi dhammaan dharka, qalabka guryaha, sariiraha ay ku jirtay xayawaanku, haddii kale jeermisku mar kale ayuu ku faafi doonaa.
Ku jawaab cam
Cam, qodobka waxaa lagu caddeeyay in isnidaamku yahay cudur aad u faafa isla markaana ay qaadato waqti in la daweeyo. Markaa waa muhiim in la nadiifiyo busteyaasha, dharka, marka la soo koobo, guriga oo dhan si looga hortago in reerku cudurka ku dhaco. Intaas waxaa sii dheer, waa lagugula talinayaa (runtiina, waa ku qasab haddii aan dooneyno in xayawaanka ay dhibaatadu saameysey iyo kuwa kaleba ay awoodaan inay ku noqdaan nolol caadi ah) in qofka qaba cudurka lagu hayo qol gooni ah.
Laakiin sidoo kale wuxuu u baahan yahay kalgacal. Lagama reebi karo qoyska oo dhan 24 saacadood maalintii, ama murugada uu dareemi karo ayaa xaaladda uga sii dari doonta. Dabcan, waa inaan sifiican u ilaalino, oo aan ka hortagno, gaar ahaan caruurta, inay u soo dhowaato bisadan ilaa ay ka bogsato.
Haye sidee wax yihiin? Waxaan dhawaan qaatay digaag yar oo aad arki karto oo leh cudurka isnadaamiska (aniga kama haysto bisadda) waxa foosha xunna waa inaan ku dhego cawradeyda ... iyo jirkeyga oo idil ayaa cuncun, illaa iyo hadda ma haysto wax finan ah waxayna ahayd Toddobaadkii in badan ayuu i cuncunaa ... Waxaan xaqiiqsaday in nooca isnadaamiska ee ay leedahay uu yahay cheiletiellosis maxaa yeelay bisaduhu waxay u lahaan jireen cowska dhogorteeda ... ma jiraan wax daaweyn ah oo gurigayga lagu daaweeyo iyada oo aan dhakhtar loo tegin?
Waa salaaman tahay Silvana.
Waxaad ku dalban kartaa Aloe vera gel oo aad ka heli karto iibinta dhirta dhirta, laga yaabee xitaa suuqa weyn ama farmashiyaasha.
Sikastaba, hadii astaamuhu aysan dhaqso u bixin, dhaqtar arag.
Ah ok aad baad u mahadsan tahay… .Waan isku dayi doonaa .. waxa kaliya ee aan isku dayay waa inaan isticmaalo jirkoo dhan jirkayga, xitaa timahayga… waa codsigii ugu horreeyay welina wuu i qaniinayaa vinegar khalkan ayaa ku wanaagsan tan Nooca isnadaamiska? Sida aan ku akhriyey maqaal wuxuu leeyahay kaliya cayayaanka ayaa taga, laakiin maqaallada kale waxay dhahaan maya ... Ma garanayo cidda aan aaminsanahay
Haa, waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah. Laakiin waxay kuxirantahay arin kasto: waxaa jira dad la caawin karo, iyo kuwa kale oo aan awoodin.
Aloe vera gel ama kareem ayaa kaa caawin kara.
Farxaddayda inaan kula kulmo. Maqaalkaagu wuxuu ahaa mid wax tar leh sidoo kale wuxuu walaac badan ku abuuray qoyskeena months 2 bilood ka hor waxaan aqbalnay bisad yar oo seexan jirtay gurigeenna. Saddex toddobaad ka hor wuxuu bilaabay inuu yeesho nabaro daran oo u eg dandruff oo leh timo lumis. Wuxuu wax ku xoqaa waxoogaa joogto ah laakiin umuuqda inaysan saameyn badan ku yeelanaynin dareenkaas. Kaliya dhowr jeer ayaa la dhaawacay. Markii hore nabarradu aad bay u yaraayeen, maanta waxay daboolayaan siddeedaad dhabarkiisa. Calaamaduhu waa caddaan oo waxay gaarayaan cawl madow, waxay u muuqdaan inay sii daayaan wax la mid ah cufnaanta, ma soo bandhigaan wax ur xun. Bisadu waxay umuuqataa inay laqabsatay iyaga, laakiin way kordhayaan cabirka si dhakhso leh waxaana ogaanay nabaro cusub oo qoorta iyo dhagaha ah.
Dad badan ayaa noo sheegaya inay tahay isnadaamis iyo kuwo kale inay fangas tahay. Magaaladeena ma lihin dhakhtar xoolaha ah, tan ugu dhow ayaa dhowr iyo toban kiilomitir u jirta, bisaduna ma ogola in guriga banaanka la geeyo.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii calaamadahaani ay ku filan yihiin in lagu aqoonsado dhibaatada ama haddii aan kuu soo diri karno sawirrada dhaawacyada si aad noogu hagtid daaweyn kasta. Waxaan si aan dhammaad lahayn ugu mahadcelin doonaa gargaarkaaga, maadaama aan aad u jeclaannay xayawaanka yar; wuxuu horey u heystaa sariirtiisa, qashinkiisa, xitaa dheriga ubax ee uu jecel yahay halkaasoo uu ku seexdo xilliga kulul.
Jawaab Xavier Chavarría
Ma jiraa qof qoyska ka mid ah (oo bini'aadam ah) oo cuncun leh? Hadday jawaabtu taban tahay, waxay u badan tahay inay tahay fangas. Waxaad ku mari kartaa jirkaaga dhammaan jirka geel aloe vera ah; Sidan ayaad ku dareemaysaa nafis waxaadna u horumari doontaa si tartiib tartiib ah.
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada. Hagaag, qof bini aadam ah ma dareemin cuncun ama wax la mid ah. Maanta uun wuxuu qabaa 3 dhaawac oo cusub. Laba dhagta midna korka indhaha. Waxay na siineysaa aragti ah in murriña uu ku faafayo.
Iyada oo leh aloe vera, miyey hagaajineysaa oo ka hortageysaa dhaawacyo badan?
Waan ka xumahay dhibaatada iyo dib u dhigista, laakiin aad ayaan uga walaacsanahay.
Aad baan u qadarinaynaa fiirsashadaada.
Waxa ugu badan ee lagula talin karaa waxay noqon karaan in la aado dhakhtarka xoolaha, maaddaama fangaska leh daawooyinka dabiiciga la daaweyn karo, laakiin waqti dheer ayey qaadanayaan.
Sidaas oo ay tahay, samirka iyo Aloe vera way ku fiicnaan kartaa. 🙂
Salaan iyo dhiirigelin badan.
Fiid wanaagsan, laba toddobaad kahor waxaan qaadanay laba nirigood (waa bil iyo badh jir) ka dib laba toddobaad ka dib waxaan bilaabay inaan arko in dhagahoodu bilaa timo yihiin, way xoqeen oo timo badan baa ka lumay, isla waqtigaasna 9-kii sano wiil jir Halo dhibic leh ayaa ka soo baxday laabta taas oo isaga waxoogaa yar ka muda. Waxaas oo dhan, waxaan u qaaday kittens-ka xoolaha waxaanan ka siiyay cirbad haddiiba ay isnac yeeshaan, boomaato loo yaqaan 'ringworm', 'cephalexin', ah! iyo sidoo kale. midkood ayaa qaba otitis.
Runta ayaan ka walwalayaa, maadaama aan ka baqayo inaan dhammaanteen qabsanno. Runtu waxay tahay anigu garan maayo inay isnidaro leeyihiin iyo in kale.
Waa maxay taxaddarrada nadaafadda ee ay tahay inaan sameeyo?
Waxaan u sameeyay aaladda ciyaalka loo yaqaan 'kittens' laakiin waa ay ku dhow yihiin jajabyada, miyay caarada isnadaamiska ku dhici kartaa qaybaha?
Ma aqaan wax aan sameeyo!
Waad salaaman tahay.
Waa inaad guriga iyo wax kasta oo ku dhex jiraba nadiif ka dhigtaa marwalba, oo ka fogee carruurta bisadaha ilaa ay ka bogsanayaan.
Cayayaanka waa yar yihiin, nasiib darrose meel walba way gaari karaan.
Daaweynta ay dhakhtarkaaga xayawaanku siisay iyaga, xaaladdan ayaa la hubaa in lagu xallin doono sida ugu dhakhsaha badan ee aad u malaynayso.
Dhiirigelin badan 🙂.
Waad salaaman tihiin, habeen wanaagsan, bisadayda, waxaan u maleynayaa inay leedahay nabaro maaddaama qayb ka mid ah jubbadu aysan lahayn, laakiin waxaan doonayay inaan ogaado haddii ay jiraan habab guryo loo isticmaali karo in lagu yareeyo bisadda. ku maydho usbuucii laba jeer waxaa jira kuwa kale.
Baaruudda waxay waxyeello weyn u geysan kartaa bisaddaada. Waxaan kula talinayaa inuu ku maydho adoo isticmaalaya Aloe vera gel, laakiin waxa la doorbidaa in dhakhtarka xoolaha uu siiyo daaweyn si uu u bogsado sida ugu dhakhsaha badan.
Waad salaaman tihiin, fiid wanaagsan, waan ka xumahay dhibaatada mar labaad, laakiin baaritaan ku samee dalabka violet iyo saliida gubashada otomaatiga ah ee loo adeegsan karo si loo daaweeyo, alaabadaasi sidoo kale waxay waxyeelleyn lahaayeen bisada iyo mahadnaq iyo salaan :).
Violet way samayn kartaa khiyaanada, laakiin gubashada saliidda baabuurka waxay waxyeello weyn u leedahay bisaddaada.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa bisad ay ka buuxaan qolofta jirkeeda oo dhan, timaheeda kamay lumin kaliya qaybaha nabarada ee nabarrada ku leh maxaa yeelay aad bay u xoqdaa, waxay qaadataa waqti dheer, waxa aan ku ogaaday waa in aan lahaa Bisad Maskaxda kahoreysa oo markaan nadiifinay kadib, isla waxiibaa ku dhacay iyadana waxaan ku nadiifiyey bisadda hadda joogta sidoo kale isla wixii aad igula talinaysay ayaa ku dhacay iyada?
Jawaab Verito Espinoza Yevenes
Waa salaaman tahay Verito.
Waxaan kugula talinayaa inaad codsato jel Aloe vera. Waxay yareyn doontaa cuncunka, waxaadna dareemi doontaa fiicnaan.
Sikastaba, hadii aysan wanaajin, waxaa fiican inaad geysid dhakhtarka xoolaha.
Waad salaaman tihiin 1 todobaad ka hor waxaan keenay bisad gurigeyga waxaan u maleynayaa inay jirto 2 ama 3 bilood, waxay xoqeysaa madaxiisa iyo dhagihiisa inbadan markay sameyso waxay soo saareysaa waxyaabo cad cad, sidoo kale dhiig ayey soo jiideysaa mana arko boodada waxay ku dhawdahay inay wax tima dhagihiisa ah, dabada waxaa ka buuxa buush: firiiric cad ayaa maqaarka ku leh timahana timahoodu ma dhalaalaan Waxaan ka walwalsanahay inay tahay cudurka isnadaamiska sababtoo ah si lama filaan ah ayey ii taabataa aniga ama bisadayda kale mararka qaar waxay xoqdaan lugaha anigana finan ayaa leh. Waxaan rabaa inaan u kaxeeyo dhaqtarka xoolaha laakiin ma haysto wax lacag ah ... fadlan i caawi, aad baad u mahadsan tahay .
Ku jawaab Andrea perez
Waad ku dhaqi kartaa jelka dabiiciga ah ee 'Aloe vera gel', adoo ka taxaddaraya inuusan soo gelin indhaha, sanka, afka ama dhegaha. Laakiin waa xalka laga yaabo inuusan kama dambaysta ahayn. Haddii ay ka sii darto, waxaa aad loogu talinayaa inaad aragto dhakhtarka xoolaha.
mooraal adag dijo
Bisadahayagu waxay leeyihiin kubbado yar yar markaan la soo baxona waxaan la soo kulmaa wax la mid ah cayayaanka oo ay aad u xoqdaan, way i caawin karaan haddii isnabab tahay maxaa yeelay gudaha ayaan ku haystaa
Ku jawaab mooraal xumo
Waxay noqon kartaa inay ahaayeen boodada. Miyaad ogaatay haddii kubadahaasi madow yihiin? Haddii aysan ahayn, markaa haa waxay noqon kartaa isnadaamis. Sikastaba, waxaan kugula talineynaa inaad dhigto dhuumaha tirtiraya boodada, shilinta iyo caarada. Habkaas uma baahnid inaad walwasho waxayna joojin doonaan xoqitaanka.
Waad salaaman tahay, ma aqaano waxaan sameeyo ... bisadeyda Luna, sida muuqata waxay leedahay fangas, timo badan ayey qoorta ku saarneyd, madaxeeda hadana hada waxay bilawday dhabarka. Dhakhtarka xoolaha ayaa siiyay kaniiniyaal laakiin uma arko inay hagaagayso taas lidkeeda. Waxa ugu xun ayaa ah waxaan ku noolahay guri yar 2 caruurtayda ah iyo bisad kale oo ilaa hada aan lahayn wax calaamado ah. Ma aqaano waxa la sameeyo ... isu soo dhawaashaha waa mid aad u adag in laga fogaado, ikhtiyaarigayguna waa inaan ka tago qaybaha oo aan u oggolaado inay wax cunaan oo ku qariyaan meeshii ay ku samaynaysay ... Aad baan u quusanayaa mana haysto ' waxaan rabaa in caruurtaydu qaado ...
Jawaab Flavia Boglione
Haddii aad awoodid, isku day inaad hesho bumbooyin la dagaallama dulinnada gudaha iyo dibaddaba (oo ay ku jiraan caarada). Way ka qaalisan yihiin kuwa kale, laakiin way waxtar badan yihiin. Waxaad sidoo kale mari kartaa kareemka Aloe vera dhamaan jirkeeda marka laga reebo wajigeeda, hal mar maalintii.
Haddii ay suurtagal tahay, ku hay hal qol illaa ay ka fiicnaaneyso.
Oo hadday ka sii darto, dib ugu celi dhakhtarka xoolaha.
Waa salaaman tahay Devorah.
Waxaad ku ridi kartaa gel Aloe vera gel ama kareem, laakiin waxay qaadan kartaa waqti si aad u bogsato.
Maanta galabnimadii waan socday oo waxaan arkay eey, waxaan bilaabay inaan salaaxo iyada wax ka yar hal daqiiqo. Markaas ayaan ogaaday in eygu leeyahay isnidaamis. Waxaan imid guriga oo gacmahayga ayaan maydhay, ma garanayo inay taasi igu filan tahay waayo waxaan haystaa bisado markii dambena waxaan bilaabay inaan salaaxo. Mana garanayo haddii ay suurtagal tahay inay sidaas oo kale ugu dhici karaan.
Jawaab Sabrina Flynn
Mabda 'ahaan, waa ku filan tahay inaad si fiican u dhaqdo gacmahaaga.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan kugula talinayaa inaad dhuumaha gashado bisadahaaga, taas oo ay dheertahay kahortaga boodada iyo shilinta, sidoo kale ka ilaalinaysa caarada.
Waad salaaman tihiin, waxaan qaatay bisad waxaanan u maleynayaa inay leedahay cudurka isnadaamiska, runti ma ogi, ilmahaygu wuu wada dilaacay, qaar ka mid ah xasaasiyadaha oo dhanna waxaan leenahay guriga, waxaan la socdaa kareemka VITACORTIL.
Waa salaaman tahay Pamela.
Waxay noqon kartaa isnadaamis. Ma aragtay wax "naqdiyayaal" oo dhaqaaqaya oo boodaya? Bisaddaadu wax badan ma xoqdaa?
Hadday sidaas tahay, waxaan kugula talin lahaa in la dul saaro xabbo lidka-baha, ka-hortagga shilinta iyo mite-ka ah. Way ka qaalisan tahay kuwa kale, laakiin waa mid aad waxtar u leh.
Haddayna weli sii fiicnayn, u tag dhakhtarka xoolaha.
Hal su’aal, gabadhayda bisadaha waa 3 BILO WAAYEY OO LA SOO BAXDAY CILAAD YAR OO waxay leedahay ilmo haddii ilmuhu taaban waayo oo bisadu qafis ku jirto, waxay ku dhegtaa sida ay rabto oo haddaba waa la siinayaa daawada waa inaanan dooneyn inaan u qaadno isku aadka
Ku jawaab Geysha lopez
Isnadaamiska waxay u baahan yihiin daaweyn, mid dabiici ah oo leh Aloe vera gel, ama xaaladaha daran, oo leh daawooyinka xoolaha.
Waa inaad aad u taxaddartaa, iyo in ka badan marka ilmuhu jiro, maxaa yeelay wuxuu ku dambayn karaa infekshan.
Aad ayey muhiim u tahay in markasta nadaafadda guriga la ilaaliyo, iyo in gacmahaaga iyo dharkaaga si fiican loo dhaqo.
Waa salaaman tahay, Habeen wanaagsan, bisadaydu waxay u egtahay inay isnac leedahay, waxay si xoog leh uga xoqaysaa dhagaha gadaasheeda waxaanan arkay inay leedahay finan yaryar iyo nabarro, ma noqon kartaa bilowga cudurka? Waan hubaa inaan horey uqaaday cudurka anigoon ogeyn, hada maxaan sameyn karaa si aan u xakameeyo cuncuntiisa daran, waan ogahay inay tahay inaan siiyo cirbado boog iyo caarado, laakiin ma aqaano sida loo codsado, isagu ma oggolaan doono, bisadaydu way neceb tahay inay u tagto dhakhtarka xoolaha waxayna ka carareysaa Marka way adkaan doontaa in la qaato laakiin haddii ay sii xumaato, waa inaan xoog ku qaataa laakiin maxaa dhacaya haddii ay sidan ku sii socoto iyada oo aan la daaweyn, bisadu way dhiman kartaa Sideen ugu daaweeyaa isnadaamiskeeda guriga, dawooyin noocee ah ayaad kugula talinaysaa? Anigana sidoo kale aniga, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inuu ahaa mid faafin maxaa yeelay jirkeygu wuu cuncun ches
U dhinida isnadaamiska uma maleynayo, laakiin inaan waqti aad u xun ku jiro haddii aan la daaweyn, haa. Nabarada iyo qolofdu waa calaamadaha cudurka.
Waxaan kugula talin lahaa Aloe vera gel ama kareem cuncun. Waxay u shaqaysaa si aad u wanaagsan xayawaanka iyo dadka labadaba. Sikastaba, hadaad cuncun, ha ka waaban inaad dhakhtarka aado.
Salaan iyo dhiirigelin.
Waad salaaman tihiin, waad ii sheegi kartaan inay iyagu yihiin ‘dhuumaha’ maxaa yeelay waxaan arkaa inay aad u xusaan… mahadsanidiin
Ku jawaab Maria ayala
Waad salaaman tahay Maria.
Badeecadaha Antiparasitic waa sida "caagag caag ah oo la simay" oo qiyaastii 4-5cm dherer ah oo ay ku jiraan dareere loo isticmaalo in lagu dilo dulinku. Caadi ahaan, waxaa lagu iibiyaa sanduuqyo ka kooban 3 ama 4 cutub, in kasta oo rugaha caafimaadka xoolaha aad waliba ka iibsan karto hal.
HELLO bisadeyda waxaan u maleynayaa inuu nabar ku leeyahay madaxiisa
Laakiin isla waqtigaas waxaan u maleynayaa xanjo ama wax ku dhegan
Fadlan aad baan u jeclahay bisadayda
Ma waxad igula talin lahayd fadlan
Miyaad aragtay hadday leedahay "dhibicyo" cad oo dhaqaaqda, sida haddii ay yihiin buskud?
Waad ku ridi kartaa xoogaa Aloe vera gel ah, laakiin waxa ugu fiican ayaa noqon kara in la geeyo dhakhtarka xoolaha.
Waa salaaman tahay, galab wanaagsan, eeg kiiskeyga, wuxuu ahaa kii xigay ee aan u aaday suuqa waxaanan ku arkay bisad qurux badan iyo ps gurigana waan keenay, wuxuu qabaa isnadaamis waana ku dhuftay, aad iyo aad ayaan uga xumaaday jirkayga oo dhan. hadana bisadaydu waxay leedahay caaradaani waa mid la isqaadsiiyo.Waxaan iibsaday vencilio vensoate iyo antibiyootiko lagu daray gamma benzene cream cudurkaan waa mid aad u foolxun hadana bisadeyda iyo bisadayda dhagahooda waxaan ku iibsaday baastada iyo wax ka badan laakiin way xun yihiin
Waxaan kugula talin lahaa in la geeyo dhakhtarka xoolaha si loo baaro. Waa tan ugu haboon ee kiisaskaas.
Mange-ka loo yaqaan 'Sarcoptic mange' waa mid aad u faafa.
Waad salaaman tihiin, bisadaydu waxay leedahay nabar dhabarka, dhagaha dhagaha, marka laga reebo aloe, maxaa daawo kale oo guriga ah oo aan isticmaali karaa, waxaan isticmaalay khal, qof qaraabo ah ayaa is scabis ku dhacay waxaana ku bogsaday baaruud, aad ayey u xun tahay hadaan sameeyo baaruud bisadayda, maxaa ku dhici kara Salaan ka timid Venezuela
Ku jawaab yohana carolina laverde
Baaruuddu waxay u dhiman kartaa bisadaha. Marna waa inaan loo isticmaalin in lagu daaweeyo xayawaanka.
Sida daawo guriga wax ku ool ah, waxaan kaliya ka fikiri karaa Aloe, raali ahow 🙁. Laakiin si aad u aragto natiijooyinka waa inaad ahaato mid dulqaad badan oo joogto ah.
Sikastaba, hadaad aragto inaysan hagaageynin, waxaa ugufiican in aad geeyso dhakhtarka xoolaha.
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada degdegga ah, aad baan u mahadsannahay, waxaan rajeynayaa inaan daaweeyo bisadeyda, waxaan codsan doonaa aloe oo waxaan weydiin doonaa dhakhtarka xoolaha daawada uu kugula talinayo in la mariyo, mahadsanid; )
Waa hubaal inay hagaagayso 🙂
Salaan, waxaan hayaa bisad. Wuxuu lahaa timo dhamaan laabtiisa, qoortiisa, brunettes, waana casaan iyo sida dhowr nabarro.
Horaan u sheegay oo waxaan ku xaliyay kiriim iyo budada likaha. Markan waa isku mid laakiin ka badan.
Waxaan hayaa gabar 5 jir ah iyo wiil 13 jir ah Bisadu waa nala joogtaa. Iyaga sidoo kale.
Ninkayga wuxuu ku adkeystay inuu uga tago gudaha. Marka wax dhaawac ah soo gaarin
Hadda waxaan ka walwalsanahay caruurtayda iyo annaga.waxaan safarnay 20 maalmood waana walwalsannahay
Ee ku faafaya mukulaasha
Haddii bisaddu hagaagi weydo, dhakhtarka xoolaha waa inuu sida ugu dhaqsaha badan u arkaa, gaar ahaan isagoo tixgelinaya inay jiraan carruur.
Waxaan kugula talin lahaa in la mariyo kareemka aloe vera, laakiin waxaan ka baqayaa in kiiskeeda aysan ku yeelan saameyn dhaqsaha badan ee la filayo 🙁.
Waad salaaman tihiin, aad baad ugu mahadsan tihiin macluumaadka! Waxaan hayaa 3 bisadood, hooyo iyo ilmo 5 bilood jira. Waxay ku leeyihiin aagag casaan ah indhahooda oo ku fidaya qoorta. Aad ayey u cuncunayaan timahooduna waa khafiifayaan qaybahaas. Waxaan codsanayaa xalka daawada chlorhexidine iyo cetrimide ee la ii siiyay si aan u nadiifiyo nabarka jeermiska ee hooyada. Waxaan bilaabay inaan codsado dareeraha maxaa yeelay waxaan ka aqriyay tilmaamaha in loo isticmaalay isnadaamiska, waxa xun ayaa ah in aanan arkin inay yareeyaan cuncunka. Aloe vera ka sokow, malabku ma ku fiicnaan karaa taas? Iyo boorashka? Waxaan aqriyay in labaduba ay kufiicanyihiin iitations, laakiin ma ogi inay ku shaqeeyaan bisadaha ama inay leefleefi karaan.
Wax kale, seddexda bisadood waxay ku seexdaan qolkayga, sariirteyda oo hadda ma dhigi karo. Waxtar ma yeelan laheyd in jeermiska lagu dilo qolka iyo bustayaasha biyo kulul iyo bilic? Salaan!
Jawaab Jo Maarso
Nabadeey Maarso Maarso.
Ma fiicna malab, maxaa yeelay waxay leedahay sokor badan oo haddii leefleeco ay waxyeello yeelan karto.
Oatmeal, si kastaba ha noqotee, waad isticmaali kartaa waqti ka waqti.
Marka la eego nadiifinta qolka, kuma talinayo inaad isticmaasho biliij, sababta oo ah khatarta ay ugu leedahay xoolaha. Waxaad isticmaali kartaa nadiifiye caadi ah oo dabaqa ah.
Ma aqaano in faaladaydu timid: /. Aloe ka sokow, malab ama boorash ma loo isticmaalaa in lagu cuncunka cuncunka?
In loo isticmaali karo isnac bisadda ,,, Waxaan u maleynayaa in Siamese-kayga uu leeyahay, marka hore bar cad ayaa ka muuqatay dhogortiisa ka dibna wuxuu lahaa timo gebi ahaanba ah si jirkiisu u muuqdo.
Jawaab Dariana Perez
Waxaad ku ridi kartaa Aloe vera gel, laakiin waxaa ugu fiican inuu arko dhakhtarka xoolaha.
Waad salaaman tihiin marka hore waad ku mahadsan tihiin macluumaadkan !! Waxaan haystaa bisad 1 sano iyo badh jir ah oo aan korsaday, laba bilood ka dib markay timid waxay ku bilaabatay inay qolofta qoorta ka hoos marto oo waxay ku fideysaa dhinacyada madaxa, sidoo kale madaxa, midig meesha dhaguhu ku dhashaan. Waa diir nadiif ah, ma soo baxaan, laakiin maqaarkeeda ayaa u muuqda mid cawlan oo labada dhakhtar ee dhakhaatiirta xoolaha ah ee qaatay waxay ii sheegeen waxyaabo kala duwan: midka 1aad ee fangas qabay oo siiyay ivermectin la isku duro iyo kareem Dermomax ah, wuxuu qaatay 1 bilood iyo badh iyo maya waxaan arkay isbeddel, taa beddelkeedana way sii xoqday. Kii 2aad wuxuu ii sheegay inay tahay xasaasiyad cunno, waa inaan u soo iibiyaa cunto aad qaali u ah oo uu siinayo cirbad 15-kii maalmoodba mar la siinayo corticosteroids, bil kale iyo badh ayaa dhaaftay oo keliya ma fiicna, wuu sii wadaa diirka ka saaraan !!! WAAN KU BAXSANAHAY, MA GARO CIDII AAN UGU BAXAYO OO AAN U BAAHANAHAY CAAWIMAAD, MA RABO IN AAN WADA JOOJIYO LA dagaalanka DHAMMAAN, FADLAN CAAWIMAAD !!! MAHADSANID!!! (Waxaan hayaa sawirro haddii aad u baahatid)
Waan ka xumahay in bisadaadu xun tahay 🙁
Laakiin anigu ma ihi dhakhtar xoolaha ah.
Daaweyntu mararka qaarkood way sii dheeraan karaan. Sikastaba, waxaad ku ridi kartaa kareemka aloe vera si aad maqaarkiisa ugu waraabiso.
Miyaa lagaa qaaday baaritaano dhiig ah? Haddii aysan helin, waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato waxa dhabta ah ee adiga khaldan.
Mahadsanid Moni, Waxaan moodayay inaad tahay dhakhtar xoolaha, waxaan u geynayaa dhaqtarka saddexaad ee maqaarka, macaanto!
Degdeg dhakhso !! Habsiin
gabar qurux badan dijo
Gabadheyda yar ee Zafira waa mid aad u walwal badan, qeylada ugu yar ee ay ku orodo oo ay magan gasho, ma jecla inay ka baxdo qolka jiifka, waxayna had iyo jeer tahay keligeed, waxay jidhkeeda ku siisay suuqa, iyada oo aad u xoog badan, waxay diirtay wax kasta oo kara waa laygu dhufan doonaa, waxaan ku dhejiyay koonto maxaa yeelay ma aqaano shikada wuxuuna bilaabay inuu niyad jabo laakiin haduu timaha kasoo kabanayo, waan iska siibay oo waxaa ku haray timo kaliya meesha uu leefleeyo, aad baan uga walwalsanahay , wuu ila seexdaa mana cuno cuncun !!! Maxaan sameeyaa
Jawaab Chiquita Bonita
Raadi Google si aad uhesho QASHINTA DUULAYA Bisadaha, waxaan u maleynayaa inay tahay waxa ku dhacaya bisadaada, waxay umuuqataa falcelin neerfaha dabeecaddeeda darteed. Ha joojin baaritaanka aan kuu sheegay !!!
Waxaan u maleynayaa inay la mid tahay Laura, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan wax ku weydiiyo: bisadu kaligeed waqti badan ma qaadataa? Waxaan ku weydiinayaa maxaa yeelay caajiska iyo culeyska fekerka ayaa sababi kara is-dhaawac.
Sikastaba, waxaan kugula talinayaa inaad la tashato dhakhtar xoolaha si aad u ogaato inay wax kale yihiin.
Waa salaaman tahay, sideen iskaga daaweyn karaa nafsadeyda iyo bisadeeyda labo isbuuc ka hor waxaan bisad ka qaatay dariiqa oo iyadu madaxeeda waxaa ku yaal xoogaa nasasho yar oo timo aad u yar leh marka hore ma aanan fiirsan iyada laakiin waxaan ogaaday sababta aan waan isku duubay iyada oo aan lugaha saaray oo aan hurday kadib labadan toddobaad kadib waxaan xaqiiqsaday inaan dareemayo cuncun badan lugahayga habeenkii ma seexan karo xoqida aad u badan waan xanaaqay way dhiig baxeen laakiin aad bay u yar yihiin finan yaryar oo aad u yar yar ayaa soo baxaya bisadana waxaan xaqiiqsaday inay horey u lahayd irido badan oo qoorteeda qoorta ka mid ah iyada oo aan timo lahayn waxaanan bilaabay baadhitaan waxayna leedahay nabaro waxayna igu qaadday sida aan uga bogsan karo isnadaamiska iyo bisadayda sidoo kale Aniga oo maraya dhibaato lacagtu iiguma sareyso shaqo badan Waxaan iibsadaa cuntada bisadda nooc ka mid ah daaweynta ka jaban fadlan
Waxaad isku dayi kartaa Aloe vera gel. Waxaad bisadda ka iibsan kartaa antiparasitic-ka ka takhalusi kara caarada (Spain gudaheeda waxaa ku yaal mid wax ku ool ah, waxaa loo yaqaan Advocate, ma ogi haddii uu jiri doono meesha aad ku nooshahay, sidaas ayaan rajeynayaa).
Sidoo kale waa muhiim in la nadiifiyo guriga iyo wax kasta oo ku jira si wanaagsan si looga ilaaliyo cayayaanka inay ku sii tarmaan.
Waa salaaman tahay, bisadayda Orion waxaa ku dhacay cudurka isnadaamiska, hadda isaga ayaa lagu daweynayaa, laakiin waa inaan u geeyo laba dhakhtar xoolaha ah, maxaa yeelay midka hore wuxuu galiyay uunbuubo iyo boomaato aan isaga u shaqeyn. Markii aan arkay in Orion wax badan ka diirmay jidhkiisa muddo laba maalmood ah, waxaan u geeyay dhakhtar kale oo caafimaadka xoolaha ah, wuxuu qaaday muunad maqaar ah wuxuuna ii sheegay nooca isnadaamiska uu hayo, waan u maydhay oo waxaan u diray dawada antibiyootigga ah ee la qaato iyo fiitamiino, waxaan ku go'doonsanahay qolkayga dhexdiisa, maxaa yeelay waxaan haystaa bisad yar oo caafimaad leh. Su'aashaydu waxay tahay: hadii Orion uu i qaadsiin karo madaama ay cagahayga ku seexanaysay mudo todobaad ah oo aanan cuncun iyo wax kale toona lahayn.
Ku jawaab Olivia
Waxay kuxirantahay nooca isnadaamiska uu yahay. Haddii aad qabtid cheiletiellosis ama isnadaamis dhegta markaa wey ku qaadsiin kartaa adiga, laakiin haddii ay tahay isnadaamiska demodectic ama noohedral uma baahnid inaad ka walwasho.
Qofka bani-aadmiga qaba wuxuu ku dhici karaa ey ama bisad.
Jawaab Verónica Gaete Mondaca
Haa, waa mid aad u faafa.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa bisad yar oo 3 bilood ka hor ay ka bilaabatay inay qoorteeda qoorteeda ka goyso gadaal oo hal bil ka hor ayay bilawday inay qolofto qayb badan oo ka mid ah qoorteeda iyo wajigeeda, maahan inay diirayso, ee waxay leedahay qolof maxaa yeelay waxay xoqid. Shakigeygu wuxuu yahay inaan la seexday sariirta dhinaceeda waxaana ii soo baxday inaanan garanayn inay tahay cilmu-nafsi iyo in kale, laakiin madaxaygu wuu xanuunayaa sida marka dhididku ka cuncunayo iyo markaan xoqonayo waxaan dareemayaa inay i xoqayso sida dandruff ama wax lamid ah waxaanan ka walwalsanahay haddii ay aad isu murgi karto haddiiba ay dhacdo in isnakay leeyihiin
Bisad ahaan, waxaan bilaabay inaan ku daaweyno iyada oo leh aloe vera toddobaadkan waxaan geyn doonnaa dhakhtarka xoolaha.
Mahadsanid, aad baad ugu mahadsantahay horay.
Si aad u nadiifiso wixii shaki ah, waxaa ugu wanaagsan in iyada la geeyo dhakhtarka xoolaha, maadaama waxa kugu dhaca ay kuxirantahay waxa ku dhacaya bisadda.
Waan ka xumahay ma noqon karo caawimaad dheeraad ah.
Waxaan badbaadiyey bisad jimcihii la soo dhaafey, ma aanan ogeyn inay isnac leedahay, waxay ii qoreen xoogaa daawooyin ah iyo shaambo. Isla maalintaas habeennimo waxaan ogaaday finanka finanka xabadka iyo laabta iyo xitaa caloosha. Waxay ahayd saacado yar gudahood aniga maxaa igu dhacay maxaa yeelay waxaan geynay dhakhtarka xoolaha waxaanan kusii hayey iyada oo ku duuban go 'xabadkeyga. Maalintaas waxaan ku maydhay iyada oo loo yaqaan 'dermapet', waxay ahayd waxa dhakhtarku ku taliyay. Haatan waxaa jirkeyga ka muuqan finan yaryar. Miyay taasi noqon kartaa?
Waxay u badan tahay isnadaamis. Ha ka waaban inaad u tagto dhakhtarka.
Bisadda midabbada Ingiriiska, madow iyo caddaan
Immisa bisadood ayaad ku haysan kartaa guriga